Izindaba - Yabelana ngezitayela ezi-5 ezihlukile zamathini angcono kakhulu wokubamba uwoyela
Yabelana ngezitayela ezi-5 ezihlukene zamathini okubamba uwoyela angcono kakhulu
Amathini okubamba uwoyela amathuluzi afakwa phakathi kwe-crankcase ventilation system breather valve kanye nembobo eningi yokungenisa.Lezi zisetshenziswa azifiki njengezijwayelekile ezimotweni ezintsha kodwa ziwushintsho okufanele lwenziwe emotweni yakho.
Amathini okubamba uwoyela asebenza ngokuhlunga uwoyela, imfucumfucu, nokunye ukungcola.Le nqubo yokuhlukanisa inezinzuzo eziningi zenjini yemoto yakho.Uwoyela owubambayo ungahluza izinhlayiya ezingavele ziqoqeke eduze kwamavalvu okukhiphayo uma ziyekwa ukuze zijikeleze ngokukhululekile kusistimu ye-PVC yemoto.
Kulesi sihloko, sabelana ngamathini angu-5 angcono kakhulu wokubamba uwoyela ngale ndlela elandelayo:
Isitayela1: I-Oil Catch Can iyi-fit catch can jikelele.
Noma ngabe uneHonda noma iMercedes, ungakwazi ukufaka leli toni likawoyela emotweni yakho.Ihlanza ukungcola emoyeni ojikelezayo ohlelweni lwe-PVC yemoto yakho.
Lokhu kubamba kungafika nesihlungi sokuphefumula, lokhu kukuvumela ukuthi wenze ngendlela oyifisayo indlela okhetha ngayo ukufaka umkhiqizo enjinini yakho.Isihlungi sokuphefumula singasetshenziswa njengesistimu yokukhipha umoya uma sibekwe ngaphambi kwe-PVC noma ungasebenzisa ithini lokubamba ngaphandle kwalo.
Le thini yokubamba kawoyela yenziwe nge-aluminium engasindi, i-inlet kanye nolayini wokuphuma kufakiwe, kanye nepayipi le-NBR elingu-31.5in.Lokhu kubamba uwoyela akuzi nobakaki wokufaka, uzodinga ukukuthenga lokhu ngokwehlukana.
Kubalulekile ukuthi uchithe njalo ithini lakho lokubamba likawoyela ezinyangeni ezibandayo njengoba uketshezi olwakhelwe ngaphakathi lungaba yiqhwa futhi ludale umonakalo ohlelweni lokungena komoya.
I-hose ye-NBR ifakiwe.
Isihlungi sokuphefumula ongakukhetha.
Isisekelo esikhiphekayo sokuhlanza kalula.
I-Baffle ifakiwe ngokuhlukana okungcono.
Isitayela 2: I-Top 10 Yokubamba Uwoyela
Leli thini likawoyela elibanjwayo elivela ku-Top 10 lomjaho linomthamo ongu-350ml futhi lisebenza ngempumelelo ukuze kugcinwe igesi, uwoyela, ne-carbon deposits kusistimu ye-PCV.Ukusebenzisa i-oyela yokubamba kungakhuphula ubude bempilo yenjini yakho, ngokukhulula umoya ozungezayo wokungcola okungakha futhi kuvimbe ukusebenza kwesikhathi.
Lokhu kubamba uwoyela kungafika nama-adaptha anosayizi abahlukene aba-3, lokhu kusho ukuthi ungafaka ipayipi lanoma yimuphi usayizi futhi ama-gaskets angu-0-ring azosebenza kahle ukuvimbela noma yikuphi ukuvuza kukawoyela.
I-Top 10 Racing oil catch can yenzelwe ukusetshenziswa isikhathi eside.I-aluminiyamu yekhwalithi ephezulu inamandla futhi izogcina uwoyela wakho owubambayo ungavikeleka ekugugeni ngenkathi ufakiwe.
Ukwenza ukuphila kube lula nakakhulu, lokhu kubamba uwoyela kungafaka i-dipstick eyakhelwe ngaphakathi, ekusiza ukuthi uqaphe kalula inani likawoyela ngaphakathi.
Ukuhlanza okulula, isisekelo se-tank catch tank singasuswa.I-baffle ngaphakathi kwalokhu kubamba uwoyela ingasusa ngempumelelo uwoyela nezinye izihwamuko ezilimazayo ezivela emoyeni futhi isihlungi sokuphefumula sivumela ukuhlanza ukubaleka ngokukhululeka kubuyele ohlelweni.
I-dipstick eyakhelwe ngaphakathi.
Ithini le-aluminium eliqinile neliqinile.
3 ama-adaptha osayizi abafakiwe.
Isitayela 3:Universal 750ml 10AN Aluminium Baffled Oil Catch Can
Leli elinye ikani likawoyela elivela e-Haofa, kodwa lokhu kungaba namandla amakhulu kunomkhiqizo esiwubuyekeze ngaphambilini.Leli ikani likawoyela elingu-750ml, usayizi omkhulu lisho ukuthi ngeke udinge ukulithulula kaningi njengozakwabo abancane.
Lokhu kubamba uwoyela kulula ukukufaka kunemikhiqizo eminingi efanayo emakethe.Ubakaki owakhelwe ngaphakathi oseceleni kwekani kulula kakhulu ukuwufaka enjinini futhi ungasebenzisa isihlungi sokuphefumula ukuze udale isistimu ekhipha umoya, noma umane ufake ithini lokubamba ngaphandle kwalo.
Ubakaki bashiselwe ngokugcwele nge-TIG ethini lokubamba likawoyela futhi awudingi ukukhathazeka ngokudlidliza okuvela enjini ekhipha idivayisi.
Igaba likawoyela lizodinga ukuthululwa uma lisebenza kahle!Ngokuhamba kwesikhathi udaka luzogcwala ngaphakathi kwekani lakho lokubamba likawoyela futhi ungakwazi ukulihlanza kalula ekanini le-Vincos 750ml.Lo mkhiqizo unevalvu engu-3/8″ yokudonsa kanye nesisekelo esikhiphekayo, ukukhipha uwoyela ngeke kube lula.
Umthamo omkhulu - 750 ml.
Abakaki abashiselwe ngokugcwele be-TIG.
Iphansi elikhiphekayo ukuze kuhlanzwe kalula.
Kudidwe ukuhlukanisa uwoyela ngempumelelo.
Isitayela 4:I-Universal Polish Baffled Oil Reservoir Catch Can
Le khithi yokubamba uwoyela ingasiza ekunciphiseni inani likawoyela, umhwamuko wamanzi, kanye nokungcola okuphelela egatsheni lemoto yakho.Imfucumfucu eyakhelwe ngaphakathi ku-crankcase ingaholela ekushayweni kwenjini futhi injini engcolile ngeke isebenze kahle njengoba ihlanzekile.
I-oil catch can ilingana emhlabeni wonke futhi ine-baffle ezopholisa ngempumelelo umhwamuko namagesi angcolile kube uketshezi oluhluzwa kalula.Noma yibuphi ubuthi buzohlukaniswa emoyeni futhi bugcinwe ngaphakathi kwekani lokudoba uwoyela.
Ikhithi ye-Haofa oil catch can ilungele ukusetshenziswa ezimotweni eziningi njengoba ilingana nendawo yonke futhi ukufakwa kungaqedwa kalula.Asikho isidingo sokuba umakhenikha ukufaka leli gaba likawoyela elididayo emotweni yakho.
Le khithi ihlanganisa ithini lokubamba uwoyela, intambo kaphethiloli, 2 x 6mm, 2 x 10mm, kanye nokufakwa okungu-2 x 8mm, kanye namabhawodi nezinsimbi ezidingekayo.
Ukufakwa kosayizi abahlukahlukene kufakiwe.
Isitayela 5: I-Oil Catch Can With Breather Filter
I-Haofa oil catch can iyikani elingu-300ml elihlala isikhathi eside ne-aluminium eliqinile elinesihlungi sokuphefumula esengeziwe.Isihlungi sokuphefumula singasetshenziselwa ukwakha isistimu ekhipha umoya noma ukubamba uwoyela kungasetshenziswa nje nge-baffle eyakhelwe ngaphakathi ukuhlanza umoya ngokuphumelelayo, ukuwukhulula kuwoyela nokunye ukungcola.
I-baffle yangaphakathi ine-dual-chamber, evumela leli thini likawoyela ukuthi linikeze ukuhlunga okusebenzayo, okungcono kuneminye imikhiqizo emakethe.
Ukusebenzisa lokhu kudotshwa kukawoyela kungaholela ekuncipheni kodaka kanye nemfucumfucu kawoyela ezungeza uhlelo lwe-PCV.Igaba likawoyela lizothuthukisa ukusebenza kwenjini yakho, injini ehlanzekile izosebenza kahle kakhulu futhi ngethemba, ihlala isikhathi eside.
Lokhu kubamba uwoyela akukwazi ukuza nobakaki wokufaka kodwa i-universal fit oil catch can iza nezikulufu ezidingekayo, 0 – amaringi, kanye nepayipi.
Isiphithiphithi sangaphakathi samagumbi amabili.
Isihlungi sokuphefumula osikhethayo sifakiwe.
Kwenziwe nge-aluminium eqinile nehlala isikhathi eside.
Isikhathi sokuthumela: Apr-02-2022